Oxytocin (အောက်ဆီတိုဇင်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Oxytocin (အောက်ဆီတိုဇင်)
Oxytocin (အောက်ဆီတိုဇင်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Oxytocin (အောက်ဆီတိုဇင်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Oxytocin (အောက်ဆီတိုဇင်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Oxytocin သည် သားအိမ်ကို ညှစ်စေသော သဘာဝဟော်မုန်း တမျိုးဖြစ်သည်။ Oxytocinကို မီးဖွားရာတွင် သားအိမ်ညှစ်အားကောင်းစေရန် နှင့် မီးဖွားအပြီး သွေးလွန်ခြင်းကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန် အသုံးပြုသည်။ သားလျှောချင်သလိုဖြစ်သည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် သားအိမ်ညှစ်ခြင်းကို အားပေးရန်လည်း Oxytocinကို သုံးသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ အချက်မျာအပြင် အခြားသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်လည်း Oxytocin ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
Oxytocin (အောက်ဆီတိုဇင်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Oxycitocinကို အကြောသွင်းဆေးအဖြစ် သွေးပြန်ကြောထဲ ထိုးသွင်းရသည်။Oxytocin ထိုးခြင်းကို ဆေးရုံတွင်သာ ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ သားအိမ်ညှစ်အားနှင့် အခြားသော အရေးကြီးသည့်အခြေအနေများ (နှလုံးခုန်နှုန်း၊သွေးပေါင်ချိန် စသည်)ကို Oxytocinဖြင့် ကုသနေချိန်တလျှောက်လုံး စောင့်ကြည့်နေရမည်ဖြစ်သည်။ ကလေးအပေါ် Oxytocin ၏ အာနိသင်သက်ရောက်မှုများကို သိရှိနိုင်စေရန် မီးဖွားစဉ်ကာလတွင်လည်း ကလေး၏ နှလုံးခုန်နှုန်းကို စက်အသုံးပြု၍ စောင့်ကြည့်နေရမည်။
Oxytocin (အောက်ဆီတိုဇင်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Oxytocin ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Oxytocin ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Oxytocin ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Oxytocin ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Oxytocin ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Oxytocin (အောက်ဆီတိုဇင်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ Oxytocin ဆေးသောက်သုံးမည်ဆိုလျင် အောက်ပါအခြေအနေများကို သတိထားသင့်သည်။
Oxytocin ဆေးနှင့် သို့မဟုတ် အခြားသောဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်သည့် လက္ခဏာများ ခံစားရဖူးပါက ဆရာဝန်ကို သေချာစွာအသိပေးပါ(ဆေးသာမက အစားအသောက်၊ဆိုးဆေး၊အစားအစာများကို တာရှည်ခံအောင်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်များနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများပါ အကျုံးဝင်သည်)။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်ဆေးမဟုတ်ပါက ဆေးညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
ကလေးငယ်များတွင် Oxytocin ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လုံလောက်စွာ သုတေသနပြုလုပ်ထားခြင်း မရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် ဆေး၏ အကျိုးအာနိသင်ထိရောက်မှု သို့မဟုတ် လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို မသိရှိနိုင်ပါ။
လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များအရ သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် Oxytocin ၏ အသုံးဝင်မှု ဆေးစွမ်းကို ကန့်သတ်စေမည့် ပြဿနာမရှိသေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Oxytocin (အောက်ဆီတိုဇင်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Oxytocin (အောက်ဆီတိုဇင်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါလက္ခဏာများ ခံစားရပါက Oxytocin သောက်သုံးခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ပြသပါ။
-ကလေးမွေးပြီး အချိန်အတော်ကြာသည်အထိ သွေးအလွန်အကျွံဆင်းနေခြင်း။
-ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊စကားပီပီသသမပြောနိုင်ခြင်း၊ထင်ယောင်ထင်မှားများဖြစ်ခြင်း၊ပြင်းထန်စွာ အန်ခြင်း၊အလွန်အားနည်းခြင်း၊ကြွက်သားများ အလွန်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ခန္တာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဦးနှောက် အာရုံကြောတို့အကြား စည်းချက်ညီညီအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း ပျက်ယွင်းခြင်း၊တက်ခြင်း၊သတိလစ်ခြင်း၊အသက်ရှုဖြည်းညင်းခြင်း သို့မဟုတ် အသက်ရှုရပ်သွားခြင်း။
-သွေးပေါင်ချိန်အလွန်တက်ခြင်း (ဆိုးရွားစွာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊အမြင်ဝါးခြင်း၊နားထဲတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော အသံများကြားနေခြင်း၊စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊အသက်ရှုကြပ်ခြင်း၊နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊တက်ခြင်း စသည့်လက္ခဏာများ ခံစားရမည်။)
-သားအိမ်ညှစ်အားပိုပြင်းထန်ခြင်း၊ညှစ်သည့် အကြိမ်ရေစိပ်ခြင်း (၎င်းတို့မှာ Oxytocin ထံမှ လိုချင်သော အာနိသင်များဖြစ်သည်)။
ဘယ်ဆေးတွေက Oxytocin (အောက်ဆီတိုဇင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Oxytocin ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Oxytocin (အောက်ဆီတိုဇင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Oxytocin က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Oxytocin (အောက်ဆီတိုဇင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Oxytocin ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
-သွေးနှင့်ပတ်သက်သော ပြဿနာများ (ဥပမာ။ ။ ဦးခေါင်းတွင်း သွေးယိုစီးမှု)
-သွေးတိုးရှိခြင်း ——> အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေမည်။
-ကလေး အောက်ဆီဂျင်လုံလောက်စွာမရသဖြင့် လက္ခဏာများပြခြင်း။
-သားအိမ်ခေါင်း သို့မဟုတ် သားအိမ်တွင် ခွဲစိတ်မှုအကြီးစားလုပ်ဖူးခြင်း (ဥပမာ။ ။ ခွဲမွေးဖူးခြင်း)
-သားအိမ် အလွန်အကျွံ ဖောင်းကားခြင်း။
-သားအိမ်ညှစ်ရာတွင် ပြဿနာများ ရှိခြင်း (ဥပမာ ။ ။ သားအိမ်ပျော့ခြင်း၊သားအိမ်အလွန် ညှစ်ခြင်း)
-ကလေးအနေအထားမမှန်ခြင်း (ဥပမာ။ ။ ကန့်လန့်ဖြစ်နေခြင်း)
-ခွဲမွေးရန်လိုအပ်သော အခြားအခြေအနေများ (ဥပမာ။ ။ ချက်ကြိုးကျွံခြင်း၊အချင်းရှေ့ရောက်ခြင်း၊အချင်းမှ သွေးယိုခြင်း သို့မဟုတ် အရေးပေါ်အနေအထား) ——> အဆိုပါ အခြေအနေများရှိလျှင် အသုံးမပြုသင့်ပါ။
-ကျောက်ကပ်ရောဂါများ ——> သတိဖြင့်အသုံးပြုပါ။ ခန္တာကိုယ်ထဲမှ ဆေးစွန့်ပစ်မှုကို နှေးစေသဖြင့် ဆေး၏အာနိသင်မှာ ခန့်မှန်းထားသည်ထက် များလာနိုင်သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Oxytocin (အောက်ဆီတိုဇင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အခြေအနေအရ လိုအပ်၍ ပုံမှန်ထက်စောမွေးလိုသော အခြေအနေများအတွက်
ကနဦးဆေးပမာဏ —–>တနာရီလျှင် 0.5 – 1 milliunits ကို အကြောသွင်းဆေးအဖြစ် သွင်းပေးရမည်။ လိုအပ်သော သားအိမ်ညှစ်အား ရချိန်အထိ ဆေးပမာဏကို နာရီဝက် သို့မဟုတ် တနာရီခြား တခါ 1 –2milliunits စီတိုးပေးရမည်။
သွေးထွက်လွန်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရန် ၁၀ – ၄၀ ယူနစ်ကို ၁၀၀၀စီစီနှင့်ရောပြီး သင့်လျော်သော နှုန်းဖြင့် သွင်းရမည်။ အချင်းထွက်ပြီးနောက် Oxytocin ၁၀ယူနစ်ကို အသားထိုးဆေးအဖြစ် ထိုးရမည်။
သားပျက်သားလျှောခြင်းအမျိုးမျိုးအတွက် သားအိမ်ခြစ်ပြီးနောက် :၁၀ယူနစ်ကို ၅၀၀စီစီနှင့် ရောပြီး အကြောသွင်းဆေးအဖြစ်သွင်းပေးရမည်။ သားအိမ်ညှစ်ခြင်းကို အားပေးရန်အတွက် သင့်လျော်သော နှုန်းဖြင့် ပေးပါ။
ကိုယ်ဝန်အပတ်၂၀ဝန်းကျင်၌ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းတွင် ရေမွှာအိတ်ထဲ ဆေးထိုးပြီးနောက် : တမိနစ်လျှင် 10 – 20 milliunits ပေးရမည်။ ရေဓါတ်အလွန်အကျွံများခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် စုစုပေါင်းဆေးပမာဏသည် ၁၂နာရီအတွင်း ၃၀ယူနစ်ထက် မပိုရ။
ကလေးတွေအတွက် Oxytocin (အောက်ဆီတိုဇင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Oxytocin (အောက်ဆီတိုဇင်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Oxytocin ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အကြောသွင်းဆေးရည် : 10unis/ml (1ml, 10ml, 30ml, 50ml)
Oxytocin https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682685.html. Accessed July 12, 2016.
Oxytocin https://www.drugs.com/cdi/oxytocin.html. Accessed July 12, 2016.
က််န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား A-Z, အလှအပ
ဝက်ခြံပေါက်တတ်ပါသလား။ ဒါလေးတွေ သိထားဖို့ လိုတယ်နော်။ ။